Logo Gawaarida Maxalliga ah ayaa lagu dhawaaqay | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Marmara34 IstanbulGawaarida gawaarida maxalliga ah ayaa la shaaciyey
06 / 01 / 2020 34 Istanbul, GUUD, WADADA, Headline, Gobolka Marmara, baabuurta, TURKEY
astaanta gaariga ee gudaha ayaa la muujiyay
Madaxweyne Recep Tayyip Erdoğan wuxuu caddeeyay in sumadda gaariga maxalliga ahi tahay “tulip ında barnaamijka” Si gaar ah ula leeyahay Madaxweynaha Kanal oo ay si wada jir ah u baahinayaan telefishanka Kanal D, CNN Türk.
Turkiga Erdogan weydiiyo si ay u qiimeeyaan sida gaariga, "markii ugu horeysay ee ay saaxiibada keenay design this, design this dhab ahaantii i siiyey farax dheeraad ah. Waxaan horay u tuuray 5 babayit go'aankaan. 5-ta caryanigit sidoo kale waa ganacsato muhiim u ah dalkeena. Markaa waa kiiska. Taasi ma dhici karto haddii aad kacdo oo aad qof dumiso. Markii hore, waxaan la hadlay qaar ka mid ah ganacsatadayada qaybtaas ku jirtay laakiin wax natiijo ah kama helin. Laakiin markan shantahan babayğit-ka ayaa soo galay ganacsiga. Tallaabada la qaaday, saaxiibkeen, oo isagu ku jira jagada madaxa fulinta, runtii waa saaxiib soo caddeeyey inuu isagu dibadda joogo. Isaguba wuu garanayaa maaddada. Tallaabadan ayaan la qaadnay iyaga.
Turkiga Erdogan sharaxay in gaariga uu leeyahay 5 design kala duwan, hadda design saddexaad soo baxay waa, ayaa sheegay in wax badan oo mugdi ah cayishay midabka buluuga ah ee baabuurka.
Erdogan, isagoo cadeeyay in raaxada gudaha iyo raaxada gaariga, "Waxaan u fadhiyi karaa si raaxo leh inkasta oo aan dhererkayga tusaale u yahay." Ayuu yidhi.
Mar la weydiiyay in gaarigu xawaare ku socdo, Erdogan wuxuu yiri: “Meesha xawaaraha ku jirta ayaa masaafada qaadan karta Meel aad u wanaagsan. Waxaan rajeyneynaa dhamaadka sanadkan inay qaadi doonaan imtixaanka intaa ka sii dheer, laakiin 2022 ayaa hada dhameystiri doona. Isla waqtigaas, waxaan rajeynayaa inaan ku dhammeyn doonno warshadda Gemlik. Hadda waxaan helnay warshadda ama wax. Waxaan durbadiiba gacanta u gelineynaa. In ka badan hal milyan oo mitir oo laba jibbaaran. Waxaan ku siin meel meel ku dhow badda Gemlikte. Sababta oo ah kama dhigi kartid mid joogto ah ka dib suurtagalnimada dhoofinta meeshan ma sarreyso. Waxay noqon doontaa mid dhoofinaysa. Miyayna taasi ahayn inay gudaha ku jiraan? Dabcan way ahaan doontaa, laakiin haddii kaabayaasha dhoofintu ay fiicnaato markaa labadoodaba way badbaadin doonaan baabuurkaaguna wuxuu boos ka heli doonaa suuqyada adduunka hadda. ”
Qiimaha Turkey ee Baabuurta
Madaxweyne Erdogan ee Turkey on su'aasha ah waxa ku dhacaya qiimaha gaariga, "Waxaan aaminsanahay in dadkeenna ay noqon doontaa in gaariga qaadan kartaa hal dhibic mobile ah ee xiiso aan gelinaya aad si fudud, waxaan rajeynayaa, Waxaan qabaa. La'aanteed, falsafadda lagu guuleysto nooca ayaa shaqeynaysa. Aad uga muhiimsan muddooyinka hore. Laakiin mar haddii tani ay aad iyo aad u muhiim tahay. Waxaan hadda samaynaynaa gaari koronto ah. Deegaanka oo dhan. Tani waa hantida. Muuqaal kale waa raaxo daran gaar ahaan aagagga ay ku yaalliin labada kursi hore iyo kan dambe. Tani waa mid aad muhiim u ah. Ma jiro cod, waxba ma jiraan
Madaxweyne Erdogan, Turkey uu xusuusiyay sida ay muhiim aasaasiga ah ee sayniska si uu horay u socdo oo ku saabsan arrimaha farsamo sida, ayuu hadalkiisa raaciyay:
Bilim Maalintaas, xarunta cilmi-baarista sayniska, halkaas oo aan ku soo bandhignay bandhiggaas, ayaa la furay. In barta sayniska aasaasiga ah ee jaamacadaha dalka Turkiga si dhab ah aan loo helin. Maalmahan, laga soo bilaabo Bariga Dhexe, Jaamacadda Farsamada, Jaamacadda Yildiz ayaa leh tan oo dhan. Jaamacadaha kale sidoo kale waxay leeyihiin waaxyo sidan oo kale ah. Laakiin hadda waa markii ugu horreeysay oo aan is-beddel ku sameyno. Tani ma aha naaftada iyo baatroolka. Waxaa jira soo jiidasho halkan. Ku wareejinta qalabka koontoroolka hore. Adiga oo adeegsanaya qalabka socda ayaa hadda 'Xagee marayaa ama tagayaa?' Waxaad odhan maayo. Laga soo bilaabo halkaas, nidaamyada khariidadaha ayaa halkaas ku geli doona sidii ay ahaayeen. Softiweerka iyo wixii la mid ah ka dib, ma ahan inaan sheego halka ay aheyd. Waa intaas oo dhan. Reer galbeedku way daryeeleen. Taasi waa waxa aan qaban karno. Iminka kaabayaashii horeba way dhammaadeen. ”
Erdogan, astaanta gaariga, "tulip" ayaa la muujiyay.
Calaamadda baabuurta ee Beşikdüzü ayaa la ogaaday
Shirkadda Akkaray oo Lagu Raadinayo Istaagaytiyada on New Lines
Gaadiidka Basaska ee Bursa ee tareenka xawaaraha sare ayaa sidoo kale lagu dhawaaqay: Naqshad casri ah
Mashruuca Tareenka ee Bursa ee tareenka xawaare sare leh ayaa lagu dhawaaqay: Aragtiyada casriga ah ee casriga ah - GANAAXYADA MUHIIM AH
Logo Gawaarida Guriga